Kaon AR: တစ် ဦး က B2B Augmented Reality Platform | Martech Zone
Kaon AR: B2B တိုးချဲ့ထားသော Reality Platform
တနင်္လာနေ့မတ်လ 27, 2017 Douglas Karr
Kaon အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် 3D အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုင်ရာအပလီကေးရှင်းများကိုပံ့ပိုးသူ။ Kaon အလျင်အမြန်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်းတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ , Kaon AR?? ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များ၏ 2D ရုပ်ပုံများကို၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များ၌နေရာချရန်ပထမဆုံးပြုလုပ်သော B3B စျေးကွက်ရှာဖွေရေး application သည် ?? အမှန်တကယ်ပတ်ဝန်းကျင်
On တန်ဂို - enabled ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန် Lenovo Phab2Proအသုံးပြုသူများသည်ထုတ်ကုန်အသွင်အပြင်များ၊ ထူးခြားသောကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမက်ဆေ့ခ်ျများကိုစူးစမ်းလေ့လာနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဝေးလံခေါင်ဖျားသောရောင်းအား၊ ကုန်စည်ပြပွဲပတ်ဝန်းကျင်၊ ရှင်းလင်းရေးစင်တာများ၊
ဖောက်သည်များသည်သင်၏ virtual ထုတ်ကုန်များ (သို့) ဖြေရှင်းနည်းများကိုသူတို့၏အမှန်တကယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေရာတွင် (စကေးဖြင့်) ကြည့်ရှုနိုင်သည့်အခါစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အရောင်းအတွေ့အကြုံ၏ထိရောက်မှုသိသိသာသာတိုးလာသည်။
ပလက်ဖောင်း B2B စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအတွက်ထူးခြားသောတန်ဖိုးနှစ်ရပ်ကိုဖော်ပြသည်။
စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုများကိုဖန်တီးပါ - ဖောက်သည်များသည်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောနားလည်မှုကိုတိုးပွားစေပြီးထုတ်ကုန်မည်သို့လည်ပတ်သည်ကိုလေ့လာသည်နှင့်အမျှပေါင်းစည်းထားသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသတင်းများကိုကြည့်ရှုနိုင်ပြီးထုတ်ကုန်ရွေးချယ်မှုများ၊ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များ (ဥပမာ - ဖယ်ရှားသည့်အစိတ်အပိုင်းများ) ကိုစူးစမ်းလေ့လာရင်းစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုဖြစ်လာသည်။
ဆက်သွယ်မှုတန်ဖိုးကွဲပြားခြားနားမှု - ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းအသွားအလာသို့မဟုတ်ဖြစ်စဉ်များကိုပြသနေသောဆွဲဆောင်မှုရှိသောကာတွန်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါ။ ထို့ကြောင့်အလားအလာရှိသောအခြေအနေများနှင့်စီးပွားရေးဝန်းကျင်အခြေအနေများ၏တန်ဖိုးနှင့်ပတ်သက်သောအဆိုပြုချက်ကိုအနာဂတ်တွင်အမှန်တကယ်နားလည်နိုင်သည်။
အသုံးပြုသူများသည်လက်ရှိစီးပွားရေးဝန်းကျင်အတွင်းရှိဒီဂျစ်တယ် 10D ထုတ်ကုန်မော်ဒယ်များ၏ ၁၀ စက္ကန့်အထိဗီဒီယိုများနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုရိုက်ကူးနိုင်ပြီးအခြား ၀ ယ်ယူသူများအား (အီးမေးလ်မှတဆင့်) မျှဝေနိုင်သည်။
Kaon Interactive မှအကြောင်း
Kaon အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု B2B ဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ Kaon ၏အပြန်အလှန်ရောင်းဝယ်မှုနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး application များသည်ရှုပ်ထွေးသောထုတ်ကုန်နှင့်ဖြေရှင်းမှုပုံပြင်များကိုမည်သည့်နေရာ၊ မည်သည့်အချိန်၌မဆို၊ ကုမ္ပဏီ ?? အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့် 3D အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး လျှောက်လွှာများသည်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ဖြေရှင်းချက်ဆိုင်ရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအကြောင်းအရာများကိုဖောက်သည်များ၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစေရန်၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်နှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အမြင်ဇာတ်လမ်းပြောပြခြင်းအတွေ့အကြုံများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးသည်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီများမှကုန်သွယ်မှုပြပွဲများ၊ ဝေးလံသောအရောင်းပြပွဲများ၊ ထုတ်ကုန်ပစ်လွှတ်မှုများ၊ အလုပ်အမှုဆောင်ရှင်းလင်းရေးစင်တာများနှင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များတွင် Kaon Interactive application ၅၀၀၀ ကျော်ကိုကမ္ဘာအနှံ့တွင်အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။
Tags: arလုပ်ခဲ့ပြီးအဖြစ်မှန်b2bမြင့်မားသောအလျင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်းkaonkaon ARkaon အပြန်အလှန်